Linux Deepin: Qaybinta kale ee Ubuntu ku saleysan ee leh Gnome Shell | Laga soo bilaabo Linux
Linux Deepin: Qaybinta kale ee Ubuntu ku saleysan ee leh Gnome Shell
En webupd8 saaxiibkeen Andrew wuxuu sameeyaa Dib-u-eegis ku saabsan qaybinta iyada oo ku saleysan Ubuntu 11.10 kaas oo ku yimaada asal ahaan Qolofta Gnome isna wuu is odhanayaa linux qoto dheer.
Qaybintaan waxaa haaya dadka isticmaala Shiinaha sidaas darteedna, waxaa lagu heli karaa Shiinaha iyo Ingiriisiga, in kastoo markii la rakibo ka dib, dabcan, luuqado kale lagu dari karo. Ka kooban GnomeShell 3.2.1 iyo kordhin qaar ka mid ah oo siiya Degaanka desktop-ka muuqaal aad u gaar ah. Xaqiiqdii, hadaad qeybta sare qeybta hoose dhigto, waxaan dhihi lahaa waa Windows 7 ????
Dheeraad Waxay kudareysaa taxane isdaba-joog ah si loo gaaro muuqaalkeeda, qaar iyada u gaar ah. Dhamaantoodna waxaa lagu heli karaa natiijada ah in Dash ma shaqeeyo (Qari Dash) iyo in miisaska lagu muujiyey dhinaca bidix, aad uga soo horjeedka Qolofta Gnome. linux qoto dheer USA Zukitwo oo leh codad cagaaran, iyo sidoo kale wax ka beddelid la mid ah tan Faenza.
Dhibic ku habboon qaybintaani waa inay ku darto mid u gaar ah Xarunta Software. Ku dar codsiyada sida LibreOffice, Firefox, Thunderbird, GNOME Mplayer, Deadbeef (ciyaaryahanka codka aan ugu jeclahay), Iptux, uGet, Qalabka Tweak GNOME, ka mid ah. Waxa kale oo ay kudareysaa koodhadh horay loo sii rakibay iyo Adobe Flash.
Waxaad soo dejisan kartaa linux qoto dheer ka xidhiidhkanHadday sidaas sameeyaan oo ay isku dayaan, waxay hadhow ii sheegi doonaan sida ay wax u dhaceen 😀
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Qaybinta » Linux Deepin: Qaybinta kale ee Ubuntu ku saleysan ee leh Gnome Shell
Waxay qabataa dareenkeyga, waxaan arkay sida ay ugu shaqeyso fiidiyowga waxayna umuuqataa inay sifiican usocoto, maalin maalmaha kamid ah waan isku dayi doonaa.
Si aad u kala duwanaato hal ka badan oo ah disto ku saleysan ubuntu. Waxay i xasuusisay ubuntu.gnome shell remix, in kastoo xaaladdan muuqaalku aad uga taxaddarayo marka lagu daro lahaanshaha astaamo u gaar ah oo ay ku kala duwanaan karto inta kale taas oo ka dhigaysa xulasho aad u xiiso badan in la isku dayo.
Waxaan dhigay qeybta kore salka, waxaan dhihi lahaa daaqadaheeda 7
Marka waxaan kala soo bixi karaa laba shay:
- Ku saleysan Winbuntu
- Asal maaha
Waxaan dhihi lahaa "distro kale oo dheeri ah" ... laakiin waxaa loo arkaa inay waqti u hurayaan qaabka muuqaalka oo qaybtayda waxaan ka siinayaa dhibco taas; sidoo kale, haddii aad rabto inaad ka dhigto isdhexgalka nidaam Linux ah isticmaalaha mid sahlan, waxaa fiican inaad tusto iyaga 'waxyaabo yaryar' oo caan ah, sidaa darteed wareejinta laga bilaabo win7 ee loo wareejinayo waxay noqon doontaa mid aan dhib badneyn haddii taasi ay tahay waxa ay shiineysyadan qorsheynayaan .
Ahaanshaha Gnome, waa wax soo jiidasho leh laakiin baarku waa wax yar oo dabaylo ah, oo aanan jeclayn, sida nuqul kasta oo kale
Haatan waan isticmaalayaa, runtii waan jeclaaday hadana waa waxa aan jeclahay distro 🙂
Goor dhow waxay noqon doontaa lambarka koowaad ee barnaamijka 'Distrowatch 😀'
Dadka gubtay maxay u dhintaan?
Weli shaki weyn ayaan qabaa ... maxaa yeelay haddii Midnimada waa caano ma leh distro laga soo dheegtay Ubuntu qoloftaas?
Aniga runta waa muuqaalka linux qoto dheer Waxaan u arkaa mid xarrago leh oo si fiican loo shaqeeyay. Beddel fiican ayaa ii muuqda.
Su’aal wanaagsan. Xusuusnow taas Midnimada Waxay leedahay ujeedo ka geddisan Desktop-ka soo jireenka ah, laga yaabee inay taasi tahay sababta qeybinta inteeda kale (oo aan danaynayn inay daboosho wixii ka dambeeya PC-ga) aysan danaynayn isticmaalka Shell-ka.
Dhab ahaan! Taasi waa qodobka ... waxay ila tahay aniga inay tani noqonayso barta loogu hiilinayo kuwaas distros-ka ah, iyadoo la ilaalinayo shaashad loogu talo galay inay ku shaqeyso PC desktop-ka. Mashruuca Luna, ee Dugsiga Hoose Waxay sidoo kale ku socotaa dhinacaas, taas oo ah tilmaame inaanaan ahayn "koox dib-u-habeyn ah" oo wali jecel inay isticmaalaan miis wax ku ool ah.
Xaqiiqada ah inay tahay "caano" daruuri ma waxay ka dhigantahay inay qasabadaha kale ay martigalinayaan?
Dhibaatada ah in Midnimada loo wareejiyo meelo kale ayaa laga yaabaa inay sabab u tahay dib-u-dhejiyeynta ay Canonical ku sameyso Gnome 3. Waxay u muuqataa in u guuristeeda aysan u sahlaneyn sida xirxirida koodhka iyo ku shubista meelaha keydka ah. Laakiin… Midnimadu waa caano! Miyaad ku aragtay Ubuntu TV iyo Ubuntu ee loogu talagalay Android?
Ku raac Elav iyo faallooyinkiisa. Waxa Elav farta ku fiiqay aniga waxay ila muuqdaan kuwo aad u sax ah si aan u fahmo sababta inbadan oo naga mid ahi ay bilaabayaan inay jeclaadaan Midnimada (ka dib hagaajinta xasiloonida iyo qaabeynta). Kuweena aan aragno fursadaha ka baxsan Desktop-ka, waxaan jecel nahay Midnimada waxa ay tilmaamayso. Ma waxbaa ka khaldan si aan loogu caano maalin caano? Fikradda Lens-ka waxay iigu egtahay aniga caano aniga ahaan, tusaale ahaan.
Waan jeclahay muuqaalka Linux Deepin, waxay umuuqataa mid fiican. Waxa aan arko, bilic ahaan, waxaan u arkaa inay ka qurux badan tahay Qorfaha. Waxaan isku dayi doonaa inaan arko sida ay wax u socdaan.
Maxay dadka gubtay u dhintaan TDE?
Quusta darteed, Tina, rajo beel darteed ...
Ii sheeg markaa ... waxaan xoqidoonaa timaha yar ee harsan ... Miyey u dhintaan gubashada? 😀
Waa adiga dijo
Waad salaaman tihiin.
Waa tan ugu quruxda badan ee abid la arko, sidoo kale waxaad leedahay muusig iyo fiidiyowyo u gaar ah oo aad ufiican oo loogu talagalay qaab xirfadeed, waxay ku socotaa wadada saxda ah xitaa waxaan dhihi lahaa waxay toos ula tartameysaa LINUX MINT oo leh CINNAMON, hada waxaan ahay wax ka qoraya LINUX DEEPIN, markaa waan ogahay inay wax badan u fududeyneyso isticmaale ka yimid dhinaca kale, waxaan u hambalyeynayaa Shiinaha IN MAHADSANID…
Akhri wax dheeraad ah: http://espanol.17style.com/#ixzz28zVEXNE6
Ku jawaab erestu
Waxaan ka akhriyey bishii Diseembar, OMG! Ubuntu! Iyo wixii aan u arko waxay leedahay xarun quruxsan oo software ah (oo la heli karo si loo soo dejiyo oo loogu rakibo Debian / Ubuntu, waxaan u maleynayaa in bogooda rasmiga ah uu leeyahay).
Ma jiraa qof garanaya sababta ra'yigeygu uusan ugu soo bixin sidii ubuntu, oo ay u soo baxdo tux?
Wax ka beddel UserAgent
Sababtoo ah ma lihid Wakiilka Isticmaalaha oo si habboon loo qaabeeyey .. 😛
laakiin waxaan isku dayay in ka badan hal jeer iyo wax aan ku guuleystey in aan u habeeyo wakiilka isticmaalaha
Waxay ka heleysaa wifi ka Broadcom iyo tplink labadaba hal mar marka ay kor u kacayso maaha sida xubinta taas oo markaa muujinaysa sanduuqa wadahadalka si ay u dhaqaajiso waxayna miisaankeedu ka yar yahay 700 MB
Waxaa jira nolol maalmeed (af ingiriisi ahhttp: //cdimage.linuxdeepin.com/daily-live/desktop-en/
Ku jawaab Linukz
Haye iga raali noqo, rakib ubuntu 11.10 laakiin nidaamka ubuntu ma soo galo, kaliya gnome-ka caadiga ah ama midka aan wax saameyn ah lahayn, ku rakib sidii qolof ah. Waxaan geliyay dhowr hanaan oo horeyba ugu jiray gudaha iskuna habee wax walba oo lagu soo galo ssh kombiyuutar kale waxayna ii sheegaysaa waxay diidaysaa xididka iyo marinka isticmaalaha waxaanan isku dayay inaan ka qaado gidaarrada oo waxba kama jiraan kiisku waa inaanu ii fureynin marinka aniga, inkasta oo haddii server-ka soo galaya graxias
Waxaan u maleynayaa inaan dib u cusbooneysiin doono gnu / linux 6.0 taas oo aan aniga iga gafin 🙂
Ku jawaab igus
armaajo buug dijo
Dib u eegista Isbaanishka ee Linux Deepin 2014.2 https://www.youtube.com/watch?v=g6FULXArOHQ
Ku jawaab buhoteca
Ku qulqulaya Linux adoo adeegsanaya DLNA
OS X vs Linux: dagaalkii ugu dambeeyay